Ogaden News Agency (ONA) – Maraykanka oo Sheegay Inay 150 Daacish Ah Dileen.
Maraykanka oo Sheegay Inay 150 Daacish Ah Dileen.
Posted by ONA Admin	/ January 24, 2018
Isbahaysiga uu Mareykanku hogaamiyo ayaa waxa ay sheegeen in duqeyn dhanka cirka ah oo ay ku qaadeen xarumo ay ururka Daacish lwwyihiin lagu dilay 150 ka tirsan dagaalyahanada.
Weerarka ayaa la sheegay in uu Sabtidii ka dhacay meel u dhaw Al-Shafah oo ku taalla koonfurta bari ee Gobolka Deir al-Zour ee dalka Suuriya. Bayaan ay soosaareen isbahaysigu ayaa waxa sidoo kale lagu xusay in bartilmaameedka ay hagayeen macluumaad sirdoon taasi oo xaqiijisay in dad rayid ah aysan waxba ku noqon duqaynta lala beegsaday dagaalyahanada ISIS.
Ma jirto xaqiijin laga hayo dhanka ururka dowlada islaamka ama taageerayaashooda oo ku aadan weerarkan. Isbahaysiga uu mareykanka hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda Daacish ayaa waxay sheegeen in kooxda ay gacantooda ka baxday boqolkiiba 98 dhulkii ay haysteen ee dalalka Ciraaq iyo Suuriya.
Kooxda la baxday dowladda Islamka ayaa hada haysata qayb yar oo ka mid ah dhulka Suuriya. Dagaalyahanada ururka Daacish ayaa waxa weeraro ku haya Mareykanka ,dagaalyahanada kurdiyiinta ee gacan saarka la leh Mareykanka iyo dowlada Suuriya oo taageero ka helaysa Ruushka iyo Iiraan.